बिहीबार दिउँसो दुई बजेतिर चन्द्रागिरी नगरपालिका–४, थानकोटका विनय लामिछाने धादिङ आदमघाट बजारस्थित ससुराली हिँडे । ३५ वर्षीय विनयका साथमा थिए, पत्नी जमुना रेग्मी लामिछाने, दुई वर्षे र ६ महिने छोरा । कान्छो छोराको आज पास्‍नी थियो ।
विनय ससुराली कटेर बेनीघाट पुगेरमात्र ओर्लिए। र, सबै एकसाथ त्रिशुली नदीमा हेलिए। विनयको त प्रहरीले उद्धार गर्‍यो तर पत्नीको ज्यान गयो, दुवै सन्तान बेपत्ता छन्। प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले मिटर ब्याजको ऋण तिर्न नसकेपछि उनीहरुले आत्महत्याको बाटो रोजेको देखिएको छ। थानकोटस्थित घरमा प्रहरीले फेला पारेको ‘सुसाइड नोट’ मा धेरैलाई पैसा तिर्न बाँकी उल्लेख छ। यसबाट लामिछाने दम्पत्तिले घरबाट निस्कदै आत्महत्याको योजना बनाएको देखाउँछ।
सामूहिक आत्महत्याको यो पहिलो घटना भने होइन्।
गत वर्ष चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–१८, शशीनगरमा एकै परिवारका तीनजनाले आत्महत्या गरेका थिए। सहरी क्लिनिक टोलकी ३५ वर्षीया आमा माया आलेमगर, १४ वर्षीया छोरी विनिता र १२ वर्षका छोरा विवेकले सलमा झुन्डिएर मृत्युवरण गेका थिए। छोराले सुनाइड नोटमा लेखेका थिए, ‘बुबा, तपाईं हामीलाई नसोधी किन जानु भयो? ममीले साह्रै दुःख मान्नु भएको छ।’ नेपाली सेनामा कार्यरत उनका बाबु घटनाको दुई दिन अगाडि काठमाडौं फर्किएका थिए।
नेपालमा वर्षेनी आत्महत्या बढ्दो छ। सन् १९९० को दशकको तुलनामा अहिले आत्महत्याको दर ६० प्रतिशत वृद्धि भएको तथ्यांकले देखाउँछ। एक्लै आत्महत्याको निर्णयमा पुग्न तुलनात्मक रुपमा सहज होला तर सामूहिक आत्महत्याको निर्णयसम्म कसरी पुग्लान? त्यसमा पनि प्रायः बाबुआमाले सन्तानलाई आत्महत्याका लागि प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ। धादिङ घटनामा पनि आमाबाबुको संयुक्त निर्णयमा बच्चा लिएर त्रिशुलीमा हेलिएको देखिन्छ। सामूहिक आत्महत्याको यो डरलाग्दो प्रवृत्तिभित्रको कारण के होला?
सामूहिक आत्महत्याको एउटा कारण आक्रोश पनि हो। सुरुमै दुवै मर्नेमा सहमत हुँदैनन्। समस्या आउनुमा एकअर्कालाई दोष लगाउँछन्। कुनै तार्किक निचोडमा नपुगेपछि एउटाले मर्छु भनेर तर्साउँछ, अर्कोले लौ म पनि मरिदिन्छु भन्छ। आफू त मरे मरे, बच्चालाई चाहिँ किन सँगै मार्छन्? भन्ने लाग्न सक्छ। उनीहरुमा बच्चालाई पनि आफूसँगै आत्महत्या गराउनुपर्छ, त्यसो गर्दा न्याय हुन्छ, नत्र पाप लाग्छ भन्ने मानसिकता विकास हुन्छ। बच्चाको मायाकै कारणले आफूसँगै आत्महत्या गराउँछन्।
पति–पत्नी दुवैले एकसाथ आत्महत्या गरेका छन् भने त्यहाँ मानसिक रोग हुनसक्ने सम्भावना असाध्यै न्यून हुन्छ। किनभने, एकजनालाई समस्या भए पनि अर्कोले नीराकरण गर्छ र आत्महत्याबाट जोगाउँछ। तर आमा वा बाबुमध्ये एकले बच्चालाई आफूसँगै आत्महत्या गरे भनेचाहिँ मानसिक कारण हुनसक्छ। भर्खरै जन्मिएको बच्चा र आफूसँगै आत्महत्या गर्नेलाई हामी ‘पोस्टपार्टम डिप्रेसन’ भन्छौं। धादिङ घटना यसमा पर्दैन। त्यहाँ सामाजिक हिनताबोधको भय देखिन्छ।
प्रायः सामूहिक आत्महत्यामा सामाजिक संरचनाकै दोष हुन्छ। व्यक्तिले कुनै काम गर्न खोज्छ, त्यसमा असफलता पाउँछ, जब त्यसबाट आफू र आफ्नो मान्छेलाई समाजले तिरस्कार गर्छ भन्ने सोच पैदा हुन्छ। उसले सबैलाई एकसाथ आत्महत्या गर्न प्रेरित गर्छ। जीवनप्रति नैराश्य जगाउँछ। सबै मान्छेले सबै अवस्थामा आफूलाई सही ढंगले समायोजन गर्न नसक्दा आत्महत्या विकल्प बनेर आउँछ। यसलाई नीराकरण गर्न बच्चा हुर्काइको पद्धतिमै धैर्य, प्रेम, सहनशीलता, संघर्ष र समस्यासँग जुध्ने आत्मविश्वास बढाउनेखालको बनाउनु पर्छ। समाज र आफन्तको न्यानोपन आभाष हुने हो भने पनि मानिस आत्महत्याबाट उम्कन सक्छ। कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।